Myanmar Animal Kingdom | Dr Ko Ko Gyi's Blog
« Rakhine and Radical Monks are trying to burn down the whole Myanmar
‘Many drowned’ in attempt to flee sectarian violence in Myanmar »
In fact, later on, some of the Burmese with great vision got smarter than even ‘The Empire’ and some of the Burmese introducedanew idea to all the animals. The clever vision or concept of not accepting that the ‘The Empire’ were not the Masters and Burmese Animals are not the slaves. And they start calling themselves “The Master/Sir” in local Burmese dialect. These Master or Thakin group then started to revolt ‘The Empire’ with the help of Wild Pygmy animals, the descendent of the “Rising Sun” from the east. But those Easterners became too Cocky and showed all the cruel animal instincts. So all the animals repelled those cruel animal masters with the help of the old masters ‘The Empire’.
At the end all the animals from Burma Farm were united and they all prepared to revolt again and ‘The Empire’ understood that they were weak after the 2nd. Animal World War and have no choice but to give back the Farm to the original owners. ‘The Empire’ abandoned the farm so quickly he did not even have time to pack his things and he left everything behind for the animals to take over.
The best leader all the animals loved, Good White Elephant King (called Saddan Sin Min) was assassinated byabig Galon bird even before he was officially crowned. The plot was said to be incited by the deputy of the Sin Min, White Big Boar Master, Shoe Maung. Later while the different animals start quarrelling each group about their own territories. Some tigers start to urinate some of the tree trunks to mark their own territories. Foxes and wolves also follow the same restrictions to mark their own territories.
“Burmese Animal’s Way of Socialism”was actuallyavery clever idea. All the animal must work hard and they would get same profit. Rich animal’s shops, factories, properties were “animal-nationalized” and put into his Boar-pigs’ Army pocket. All the animal banks, animal training sc hools, animal movie cinemas etc are taken over the Wild Boar’s pig association of army. Because of the cruel Big Animal Socialist Association’s mismanagement the whole farm became power, no enough food, no leisure, no luxuries, and there were sporadic spread of animal diseases all the animals revolt and dethrone the Big Wild Boar.
Anyway, in the meantime, the SPDC Boar Pig group, who by now had learnt all British, Japanese, communist dirty tactics tried to learn further fromavery famous Middle east desert country’s POISONOUS BEES’ Intelligent tricks by sending Burmese Animal agents disguised as going to learn to breed bees. Now after learning all the Intelligent Agencies tricks around the animal world, SPDC BOARS had now become quite clever, know how to enjoy even the fruits of the animals rebels’ black market trades and knowledge of collecting protecting or gate fees and to squeeze profit from animal poppy growers and drug-trafficers. The the animals were doing all the work while SPDC Generals were getting rich and fat. While the corrupted Military cronies wine and dine the nation’s wealth away all the animals of the farm are almost starving to death.
In the Burma/Myanmar version of Animal Farm, Ne Win and Than Shwe would be equivalent to one of the prize Berkshire Boars mentioned in George Orwell’s version. The Myanmar Military and Kyant Pyut as the pigs with the ruling clique in SPDC Junta being the Berkshire boars; the non-army people are all the other animals such as the horses, goats, chickens, geese, etc. NLD U Tin Oo corresponds to Snowball who was kicked out of Army just like Snowball was kicked out of Animal Farm. General Aung San may be honoured as Saddan Sin Min or His Royal Highness White Elephant. His daughter Daw Aung San Su Kyi would bea“Fearless Fighting Peacock Princess”.
Junta ass-licking journalists from mainstream newspapers represents Squealer, the pig in Animal Farm which always spin stories to convince the other animals that what the pigs do is always right….And of course the Military Intelligence, BSI, and the police are the dogs of Myanmar Junta let loose to terrorise all the other animals into submission..
Because of the history lessons learnt from the British-empire’s successful implementation of the ‘Divide’ and ‘Rule’ concept, even after more than 58 years of independent Myanmar Military is still copying that GAME PLAN OF DIVIDE AND RULE.
All are equal, but some are more equal than others. Many animals are discriminated depend on their skin colour, the corner of the Animal Firm they are born, their race, religion. Some animal groups are discriminated because they are not the original species but their great great grandfathers had migrated to the Myanmar/Burma from neighbouring farms long time ago. They even could not get the basic animal rights as the residence of Myanmar Animal Firm.
Today,ahandful of the cleverer animals are now running the farm while the others do all the work on the farm. The cleverer animals are givenaspecial name so that you could recognise them from the normal animals. They are called Myanmar Animal Army and ex-Army animals. and many are Ministers, Directors, Managers supervisors e.t.c. above all the animals.. All the working animals are called Civilian Myanmar Animals. And the Myanmar Animal Army own all the wealth and monopolized all the permits and contracts of the farm.
First Chief Boar Chief Master Shoe Maung tried to marry into old ex-Royal Burmese family but failed. Second Boar Chief got Mad Cow’s disease and claimed that he was Kyansittha. Present Chief Boar is claiming to be the descendent of the last Burmese King Thi Paw but asadescendent he could not get the full two syllables of the last King’s name but the last one “PAW” only, which means in local Burmese Animal language to be crazy.
But the ordinary animals even have to give-up the balanced diet of Protein foralong time and some even could not even have regular rice to eat but have to buy the bottled rice water for their meal.
In 1967 The Boars slaughteredalot of Pandas who originated from the Northern Sina Farm just with some minor excuse of showing support to the Northern Dragon King.
And that Boars repeatedly sacrifice many Camels and destroyed their Bedouin Tents just to divert the attention of the discontented animals who are angry with the Boars. And according to the divide and rule policy they learned from their old masters, they repeatedly created numerous problems among the different animal groups. Because most of the animals are reluctant to fight with their friend s or same species, the Boars smear charcoal on the face of the animals so that they could not recognize each other.
So during the White Monkey Calendar of 8888 the animals revolted and got some progress. Many animals inside and outside were wishing for the another revolt in the year of 9999 according to the same White Monkey Calendar, but it was fizzled out.
Now some animals including me are hoping forafinal assault on 666 date which is coming soon. Most of the animals wish to avoid blood shed among the animals and are hoping for the Wild Boars and Pigs for repentance in time because the whole world’s animal political pressure. The pressure comes from neighbours Animal Solidarity group called Animal Slaughter Ending Animal Nations or asean, United States of Animals (U.S.A.) and United Nations (of animals) or U.N..
If the SPDC or USDA Boar Junta failed to give way for the coalition Government of National League of Democratic Animals (NLD A) led by the Fighting Peacock Princess, Burma Farm’s animals anger combined with the whole world animals pressure would annihilate all the Boars Generals. And it may not beahappy ending for the Boars Generals but anyway all the different animals of Burma Farm would happily live ever after that revolution.
As Shwe Ba in Burma Digest
Tags: Andy Serkis, Animal Farm, Animal Welfare, Animals, Burma, George Orwell, Myanmar, Wild Boar
This entry was posted on November 4, 2012 at 1:52 pm and is filed under Uncategorized.	You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leavearesponse, or trackback from your own site.
9 Responses to “Myanmar Animal Kingdom”
British Burma was mostly driven by Karen and Indians. The British could not use the Burmese ruling class in the administration because they cheated and deceived.The British could not use Burmese as nannies, because they were too brutal to babies. It must be noted here that the British were not particularly delicate. Instead spent Karen nannies because they were nice to the kids.When you are so brutal with small children so reduces the residues in touch with their feelings and can not feel what is right and wrong when they become adults.
Animal Kingdom of Bama Buddhists | Dr. Abdul Rahman Zafrudin @ Ko Ko Gyi Says:
May 14, 2015 at 11:57 am | Reply
[…] Myanmar Animal Kingdom […]
LYC Luyechun or Outstanding Students and San-pya Loke-thars or Model Workers are actually the ‘Heroes’ created by General Ne Win’s BSPP or Burma Socialist Party to use for its benefits like Boxer,ahardworking, but naive and ignorant cart horse in George Orwell‘s Animal Farm.
September 17, 2021 at 5:31 am | Reply
(သူ့အကောင့်က public တင်လို့မရလို့)
ပုံပြင်စာအုပ်လေးတွေထဲမှာ (Animal Farm) ဆိုတဲ့ (George Orwell) ရေးထားတဲ့ ပညာပေးစာအုပ်ကလေးဟာဆိုရင်
သူငယ်ချင်းတွေကို Share ချင် လို့ရယ်
စာရေးဆရာကြီး George Orwell ဟာဆိုရင်တော့
Bengal မှာမွေးတယ် eton ကောလိပ်မှာကျောင်းပြီးတော့
မြန်မာပြည်မှာ ငါးနှစ် British နဲ့အလုပ်တွဲလုပ်တယ် အစိုးရအလုပ်ပေါ့ အဲ့အချိန်ထဲကသူဟာ တရားမမျှတမှုနဲ့ သက်ဦးစံပိုင်စနစ်ကို ရှုံ့ချတယ်။ သူက၁၉၈၄ ခုနစ်မှာကွယ်လွန်ရှာတယ်
ကျနော့် စိတ်ကူး အတွေးလေးကို
တိရိစ္ဆာန်တွေကို အဲ့ဒီ့မွေးမြူရေး ခြံထဲကခြံပြင်ကိုထုတ်လို့ရရင်ရမယ်
တခြားခြံနီးချင်းက တရိစ္ဆာန်တွေကို အလုပ် ကြမ်းလုပ်ဖို့သယ်လာတယ်
ပြည့် လာလာ မညီညွတ်ကြဘူး
မခိုးပါဘူး မဆိုးပါဘူး မုဒိန်းမကျင့်ပါဘူး လူမသတ်ပါဘူး
ခိုထုပ်ခိုးထည်တွေနဲ့မချမ်းသာပါဘူး ထွီး ပြောရင်း ရွံတောင်လာတယ်)
တော်တော် တုံးတယ် ဆိုတော့
တိရိစ္ဆာန် A B C နဲ့
123 (ကျွန်ပညာ)
ခြံနီးချင်းက မျောက်တို့ ခြင်္သေ့တို့
Asia တစ်ဝန်းက ခြံပေါင်းစုံက
ဖွတ်(အင်ဒို) တွေ အစုံပေါ့
သူတို့ဘာလုပ်သင့်လဲသိလာတယ် သူတို့ကို အုပ်ချုပ်ထားတာ
မျက်နှာဖြူတွေကလဲ ဆန့်ကျင် အာခံ
April 15, 2022 at 7:53 am | Reply
ကျွန်တော့်ရဲ့ အကြိုက်ဆုံးပုံပြင်တစ်ပုဒ်ကတော့ ဂျော့အိုဝဲလ် ရဲ့ တရိစြွာန်မွေးမြူရေးခြံ ဆိုတဲ့ပုံပြင်လေးဖြစ်ပါတယ် ။
ဒီပုံပြင်လေးမှာ နိုင်ငံရေးသရော်ချက်လေးတွေကို မြှပ်ကွက်များဖြင့် ပညာပေးထားပါတယ် ။ ဒါကြောင့် ဒီပုံပြင်လေးဟာ
ကျွန်တော့် နှလုံးသားထဲမှာ စွဲထင်နေတဲ့ ဂန္တဝင်မြောက်သရော်စာ တပုဒ်ဖြစ်ပြီး ကျွန်တော်တို့ နိုင်ငံရဲ့ နိုင်ငံရေးကို ရောင်
ပြန်ဟပ်သလိုဖြစ်နေပါတယ် ။ ဒါကြောင့် ကျွန်တော်အနေနဲ့ ဒီပုံပြင်ကို ယနေ့မြန်မာနိုင်ငံရေး အခြေအနေနဲ့ စပ်လျဥၤးပြီး တင်
( ဂျော့အိုဝဲလ် (အဲရစ်ဘလဲယား) သည်အင်္ဂလိပ် လူမိုျးတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး အိန္ဒိယနိုင်ငံ ဘင်ဂယ် မှာ မွေးဖွားခဲ့သည် ။
အင်္ဂလန်နိုင်ငံ အီတန်တက္ကသိုလ်ကနေဘွဲ့ရပြီး မြန်မာနိုင်ငံရှိ ဗြိတိသျှတော်ဝင်ရဲတပ်ဖွဲ့မှာ ၅ နှစ်ခန့်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သည်။
သူသည် လူမှုရေးမတရားမှုများကို မုန်းတီးသူ တစ်ဦးပြီး အရင်းရှင်ဝါဒနှင့် ကွန်မြူနစ်ဝါဒ နှစ်ခုစလုံးကိုဆန့်ကျင်ခဲ့သည် ။
၁၉၈၄ ခုနှစ်တွင် ကွယ်လွန်ခဲ့သည် ။ မြန်မာနိုင်ငံ နေ့ရက်များ စာအုပ်ကိုလည်းရေးသားခဲ့သည် ။ )
တခါတုံးက ဗမာဆိုနဲ့ မွေးမြူရေးခြံကြီးတစ်ခြံ ရှိသတဲ့ ။ အဲဒီခြံကြီးထဲမှာ တရိစြွာန်ပေါင်းစုံ မွေးမြူထားတယ် ။
အဲဒီခြံထဲက တရိစြွာန်တွေဟာ အင်မတန်မှ စရိုက်ဆိုးတဲ့ တရိစြွာန်အရိုင်းတွေဖြစ်တာကြောင့် ဒီနေ့ သင်နေထိုင်တဲ့
မြန်မာလို့ ခေါ်တဲ့ခြံကြီးထဲမှာလည်း တခိုျ့သွေးဆာနေတဲ့ တရိစာြွန်တခိုျ့ရှိနေကြသေးတယ် ။ သူတို့ပြောတဲ့အတိုင်းဆို
အဲဒီတရိစြွာန်တွေဟာ ခြံထဲကနေ တခြားတနေရာကို ခေါ်ထုတ်သွားတာတောင်မှ သူတို့ရဲ့စရိုက်ဆိုးဟာ ပြောက်မသွား
ဘူးလို့ ဆိုကြတယ် ။ ခြံပိုင်ရှင်ကတော့ ဦးအင်ပိုင်ယာ ဆိုတဲ့သူဖြစ်သတဲ့ ။
ဦးအင်ပိုင်ယာ ဟာ တရိစြွာန်တွေ အပါ်မှာ ရက်စက်တဲ့နေရာမှာ အတော်ကို နာမည်ကြီးသတဲ့ ။တရိစြွာန်တွေ
ပေါ်မှာ ခွဲခြားပြီး မညှာမတာ ဆက်ဆံတတ်တယ် ။ ဒါပေမဲ့ ဦးအင်ပါယာ ကတော့ မူလပိုင်ခြံပိုင်ရှင်မဟုတ်ပါဘူး။ မူလပိုင်
ရှင်ထံကနေ ခြံကိုမတရား အတင်းအဓမ္မလုယူခဲ့ သူဖြစ်တယ် ။ အဲဒါကြောင့် သူဟာ နည်းမိုျးစုံသုံပြီး အာဏာကို တည်မြဲ
ဖို့နဲ့ ထိန်းခုျပ်နိုင်ဖို့ ကိုျးစားခဲ့တယ် ။ တရိစြွာန်တွေကို စည်းလုံးညီညွှတ်မှုမရှိအောင် သွေးခွဲပြီး အုပ်ခုျပ်ခဲ့တယ် ။
ဦးအင်ပါယာ ကြီးဟာ မြန်မာလို့ခေါ်တဲ့ တရိစြွာန်တွေကို ဒီလိုပြောပြီးမြောက်ပေးတယ် ဒဒ မင်းတို့ဟာဒီခြံရဲ့ငယ်မွေး
ခြံပေါက်တွေဖြစ်တယ် ၊ တခြားကောင်တွေက နောက်မှ ရောက်လာတာ ဒဒ (ကုလားနှင့် တောင်တန်းဒေသမှ မယဉ်ကျေးသေး
တဲ့ တရိစြွာန် အရိုင်းများကို တရိစြွာန် စကားဖြင့် ခေါ်သည်) ဦးအင်ပါယာကြီးဟာဈေးပေါပေါနဲ့ ခိုင်းလို့ကောင်းတဲ့ တရိစြွာန်
တွေကိုလည်း အိန္ဒိယနဲ့ တရုတ် ခြံကနေပြီးတင်သွင်းခဲ့ပြန်သေးတယ် ။ ပြီးတော့ တရိစြွာန်တွေ အခြင်းခြင်း ခင်မင်မှုမရှိအောင်
ရောထွေးမသွားအောင်လို့ဆိုပြီး ဗမာတွေကို ခြံတခြံမှာ သီးသန့်ခွဲထားတယ် ။ တခြားကောင်တွေကိုလည်း သပ်သပ်စီခွဲထား
တယ် ။ ဦးအင်ပါယာ ကြီးရဲ့သွေးခွဲအုပ်ခုျပ်ရေးယာ အတော်လေးကို အောင်မြင်ခဲ့တယ် ။ ှု
တနေ့တော ဦးအင်ပါယာ ကြီးဟာအကြံကောင်းတခုရတယ် ။ တရိစြွာန်တွေကို လူလို ပြုမူလေ့ကျင့်တတ်အောင် အင်္ဂလိပ်
စာနဲ့ ဂဏန်းသင်္ချာ သင်ပေးဖို့ ရန်ကုန်ကောလိပ်ကို တည်ထောင်လိုက်တယ် ။ အကြီးတန်းအစိုးရ အရာရှိဝန်ထမ်းများ အနေနဲ့
ခိုင်းဖို့ ပညာတတ်တရိစြွာန်များအလွှာတခုကို မွေးထုတ်ပေးဖို့ ရည်ရွယ်ခဲ့တယ် ။ @ https://drkokogyi9.wordpress.com/2021/12/07/bama-animal-farm-in-myanmar/
April 15, 2022 at 7:54 am | Reply
Myanmar Animal Farm in Burmese No2
မွေးမြူရေးခြံကြီးထဲမှာ တရိစြွာန်တွေဟာ ဦးအင်ပါယာလို ဝတ်စားပြီးတော့ အတန်းလိုက်တန်းစီထိုင်ပြီး
ဦးအင်ပါယာနောက်ကနေပြီးတော့ ဦးအင်ပါယာကြီးက အေ လို့ဆိုလိုက်ရင် တရိစြွာန်တွေကလည်း အေ
လိုလိုက်ရွတ်ကြတယ် ။ အဲဒီလိုပဲ ဦးအင်ပါယာအောက်ကနေ အေ ၊ ဘီ ၊ စီ နဲ့ ဝမ်း ၊ တူး ၊ သရီး ဆိုပြီး
လိုက်ရွတ်နေတာ မြင်ရသူတွေအဖို့ အထူးအဆန်းဖြစ်နေတော့တယ် ။
ဦးအင်ပါယာကြီး သတိမထားမိလိုက်တာကတော့ မြန်မာတရိစြွာန်တွေဟာ တဖြေးဖြေး လိမ္မာ ပါးနပ်လာပြီး
အဲဒီထဲကတခိုျ့ တရိစြွာန်ပါးဝတဲ့ တရိစြွာန်တွေက ဒီခြံကြီးကို အုပ်ခုျပ်ရတာ ဘာမှမခက်ပါဘူးကွာ
ပါတို့တောင်အုပ်ခုျပ်လို့ရတယ် လို့ဆိုတဲ့ အတွေးမိုျးတွေးကြတယ် ။ အဲဒီလိုနဲ့ ပါးရည်နပ်ရည်ရှိတဲ့ တရိစြွာန်
တွေဟာ လှိုျ့ဝှက်တွေဆုံပြီး ဦးအင်ပါယာကြီးကို ခြံထဲက မောင်းထုတ်ဖို့ ကြံစည်ကြတော့တယ် ။
ဦးအင်ပါယကြီးက ငါတို့ကို ဒုတိယတန်း တရိစြွာန်အဖြစ်သဘောထားတယ် ၊ သူပြောတာနားမထောင်
ရင် ၊ သူ့ကိုအာခံရင် ငါတို့ကို အခုျပ်ထဲထည့်တယ် ။ တခြားတရိစြွာန်တွေနဲ့ ခွဲပစ်တယ် ။ ငါတို့ရဲ့လုပ်အား
အသီးအပွင့်တွေကို သူကခံစားပြီး ငါတို့ကိုတရိစြွာန်ညွှန့်ခူးစားတယ် ။ ငါတို့ဟာဒီခြံရဲ့ ငယ်မွေးခြံပေါကတွေ
ဖြစ်တယ် ဒါကြောင့် ငါတို့သာလျှင် ခြံပိုင်ရှင်ဖြစ်သင့်တယ် ။ ဦးအင်ပါယာကြီးက မနေ့တနေ့ကလာပြီးတော့
ဒီခြံအတင်းအဓမ္မသိမ်းပိုက်ပြီး သူ့ခြံအတိုင်းအုပ်ခုျပ်နေတယ် ။ ပြီးတော့ဦးအင်ပါယာကြီးဟာ တရားမျှတမှု
လည်းမရှိဘူး ၊ တကယ်လို့ငါတို့သာ ဒီခြံကြီးကို အုပ်ခုျပ်မယ်ဆိုရင် ငါတို့တရိစြွာန်တွေ အားလုံးတန်းတူအ
ခွင့်အရေးရကြလိမ့်မယ် လို့ဆိုပြီး လိမ္မာပါးနပ်တဲ့ တရိစြွာန် တခိုျ့ကပြောတာကိုကြားရတယ်ဆိုရင်ပဲ ကျန်တဲ့
တရိစြွာန်တွေဟာ တက်ကြွဝမ်းမြောက်စွာနဲ့ အဲဒီအကြံဉာဏ်ကို လက်ခံသဘောတူကြတယ် ။ အကြာခင်မှာပဲ ဦးအင်ပါ
ယာကြီးကို ခြံထဲကမောင်းထုတ်ဖို့ ကြံစည်ကြတော့တယ် ။
အမြင်ကျယ်တဲ့ မြန်မာတရိစြွာန်တွေဟာ ဦးအင်ပါယာထက် ပိုပြီးတော့တောင် တော်သေးတယ် ။ တခိုျ့မြန်မာတရိ
စြွာန်တွေက သူတို့ရဲ့အကြံဉာဏ်သစ်တွေကို တရိစြွာန်အားလုံးကို ပြောပြစည်းရုံးကြတယ် ။ ဦးအင်ပါယာ ကြီးဟာ
သခင်မဟုတ်သလို ငါတို့တရိစြွာန်တွေ ဟာလည်းကျွန်မဟုတ်ဘူး ဆိုတဲ့ အတွေးအခေါ်မိုျး လက်ခံကျင့်သုံးလာခဲ့
ကြတယ် ။ သူတို့ကို သူတို့ သခင် လို့စတင်ခေါ်ဝေါ်သုံးဆွဲကြတယ် ။ အဲဒီ သခင်တွေဟာမကြာခင်မှာပဲ အေ့ရှဘက်
နေထွက် ကျွန်းက တရိစြွာန်ပုလေးတွေရဲ့ အကူအညီနဲ့ ဦးအင်ပါယာကြီးကို စတင်တော်လှန်ခဲ့ကြတယ် ။
အေ့ရှဘက်နေထွက်ကျွန်းက ကျွန်းသားတွေဟာ မောက်မာရိုင်းဆိုင်းပြီး မာဏထောင်လွှားတဲ့ တရိစြွာန်စရိုက်
ကိုပြလာကြတော့တယ် ။ ဒီလိုနဲ့ နောက်ဆုံးတော့ မြန်မာတရိစြွာန်တွေ ဟာ သခင်ဟောင်း ဦးအင်ပါရဲ့ အကူအညီနဲ့
ပဲ မာစတာပု တွေကို ပြန်မောင်းထုတ်ခဲ့ကြတယ် ။ နောက်ဆုံးတော ဗမာခြံထဲက တရိစြွာန်တွေဟာ ညီညီညွှတ်ညွှတ်
နဲ့ နောက်တခါတော်လှန်ကြပြန်တယ် ။ ဒုတိယ ကမBာ့တရိစြွာန်များစစ်ကြောင့် အထိနာနေတဲ့ ဦးအင်ပါယာကြီးဟာ
ရွေးစရာလမ်းမရှိတော့တဲ့ နောက်ခြံကြီးကို မူလပိုင်ရှင်တွေလက်ထဲကို စွန့်ပစ်ပြီးတော့ ပြန်ပြေးလေတော့တယ် ။ သူ့
ကိုယ်ပိုင်ပစ္စည်းတွေကို သိမ်းဖို့အချိန်မရတာကြောင့် အားလုံးကိုတရိစြွာန်တွေ လက်ထဲမှာချန်ထားခဲ့ရတယ် ။
အခုတော့ တရိစြွာန်တွေက ခြံကြီးကိုပိုင်သွားပြီ ၊ ဦးအင်ပါယာကြီးလညး သူတို့ကိုမအုပ်ခုျပ်တော့ဘူး။
အဲဒီလိုအချိန်မှာ တခိုျ့တရိစြွာန်တွေဟာ တခြားတရိစြွာန်တွေပေါ်မှာ တရိစြွာန်ပါးဝစွာနဲ့ ကြိုးကိုင်ပြီးတော့
ကိုယ်ကိုျးရှာကြသတဲ့ ။ တခိုျ့တရိစြွာန်တွေကြတော့ လည်းသာမန် တရိစြွာန်တွေလိုပဲ ပြုမူနေထိုင်ကြသတဲ့ ။
တခိုျ့ ပါးရည်နပ်ရည်ရှိတဲ့ တရိစြွာန်တခိုျ့ခေါင်းဆောင်ပြီးတော့ ဦးအင်ပါယာကြီးကို အတုခိုးပြီးတော့ တခြား
တရိစြွာန်ပေါ်မှာ ခေါင်းပုံဖြတ်ပြီး တရိစြွာန်ညွှန့် ခူးစားနေကြသတဲ့ ။
တရိစြွာန်အားလုံးချစ်ခင်လေးစားတဲ့ ခေါင်းဆောင်ကြီး ဆဒ္ဒန်ဆင်မင်းကို တော့ယုတ်မာကောက်ကျစ်တဲ့ ဂဠုန်က သရဖူမဆောင်းခင် လုပ်ကြံသတ်ဖြတ်ပစ်လိုက်ကြတယ် ။ ဒီရဲ့ ကြံစည်မှုဟာ ဆင်မင်းကြီးရဲ့ လက်ထောက် ဝက်သိုးဖြူကြီးရှူး
မောင်တို့လိုက်လို့ ဖြစ်တာလို့လဲပြောကြတယ် ။ အဲဒီနောက်မှာ တော့ တရိစြွာန်တွေဟာ ကိုယ်နယ်မြေ သူ့နယ်မြေလုဖို့
သတ်ကြ ဖြတ်ကြနဲ့ ထိမ်းမနိုင်သိမ်းမရ ဖြစ်နေကြတော့တယ် ။ ကျားတွေကလည်း ကျင်ငယ်စွန့်ပြီး သူ့နယ်မြေသတ်မှတ်
ကြသလို မြေခွေးနဲ့ ဝံပုလွေတွေ ကလည်းကျားလုပ်သလို လိုက်လုပ်ကြတယ် ။
Myanmar Animal Farm in Burmese No3
ဝက်သိုးကြီးရှူးမောင်နဲ့ သူရဲ့နောက်လိုက်ဝက်စစ်တပ်ဟာ အာဏာကို ဗမာခြံရဲ့ ဒီမိုကရေစီ အစိုးရလက်ထဲ
ကနေ လုယူလိုက်တယ် ။ ပြီးတော့ ဒီလိုလုပ်ရတာဟာ ဗမာခြံကြီး အစိပ်စိပ် အမွှာမွှာ ပြုကွဲမဲ့ အရေးကနေ ကာကွယ်
လိုက်ရတာ ဖြစ်တယ်လို့ ဆင်ခြေပေးတယ် ။ အဲဒီလို လိမ္မာကောက်ကျစ်တဲ့ ရှူးမောင်နဲ့ အဖွဲ့ဟာ ကျွနု်ပ်တို့တရိစြွာန်
များ ယုံကြည်ချက် နဲ့ ဗမာ့တရိစြွာန်ဆိုရှယ်လစ်လမ်းစဉ်ပါတီ ကြေငြာဖွဲ့စည်းလိုက်တယ် ။
ဗမာ့တရိစြွာန် ဆိုရှယ်လစ် လမ်းစဉ်ပါတီ ဆိုတာ တကယ့်ကိုတရိစြွြွာန်ပါး0xm;wဲ့ လမ်းစဉ်တစ်ခုပဲ ။ သူဌေး
တရိစြွာန်ပိုင် စက်ရုံတွေ ၊ ဆိုင်တွေ ရှိသမျှအားလုံးကို တရိစြွာန်ပိုင်အဖြစ်သိမ်းပစ်လိုက်တယ် ။ ကျန်တဲ့ တရိစြွာန်ပိုင်
ဘဏ်တွေ ၊ တရိစြွာန်တေ့ကျင့်ရေးကျောင်းတွေ ၊ ရုပ်ရှင်ရုံတွေ ကိုလည်း ဝက်သိုးကြီးရဲ့ စစ်တပ်က အားလုံးသိမ်းပိုက်
လိုက်ကြတယ် ။ နောက်တော့ဒါတွေအားလုံးကို ဝက်သိုးကြီးအိပ်ထောင်ထဲရောက်သွားအောင် ဝက်သိုးကြီးက မျက်လှည့်
ပြလိုက်တယ် ။ ဗမာ့တရိစြွာန် ဆိုရှယ်လစ် လမ်းစဉ်ပါတီ ရဲ့အောက်မှာတရိစြွာန်တွေဟာ အလုပ်ကိုပင်ပင်ပန်းပန်းလုပ်ကိုင်
ကြရပြီးတော့ ရတဲ့ လုပ်အားအသီးအပွင့်တွေကိုဝက်သိုးကြီးရှူးမောင်နဲ့ဝက်စစ်တပ်အတွက်သာဖြစ်တယ် ။ တရိစြွာန်တွေကို
တော မသေရုံတမယ် မဝရေစာကြွေပြီးထားတယ် ။ အဲဒီလို အသုံးမကျတဲ့ ဗမာ့တရိစြွာန် ဆိုရှယ်လစ် လမ်းစဉ်ပါတီ ရဲ့
အောက်မှာ ဗမာခြံကြီးဟာ တဖြည်းဖြည်းနဲ့ မွဲတေလာပြီး တရိစြွာန်တွေအတွက် အစားအားမလုံမလောက်တွေဖြစ် ၊ ရောဂါ
တွေကူးဆက်ပံျ့နံှ့ပြီး အစစ အရာရာ စိတ်ပျက်စရာကောင်းတဲ့ ဗမာခြံကြီးထဲ့မှာ ပျော်စရာဆိုတာလည်းမရှိ ၊ အပန်းဖြေစရာ
စိမ်ခံစရာဆိုတာလည်းမရှိ အဲဒီလို ချွတ်ခြုံကျဖြစ်နေတဲ့ ဗမာခြံကြီးကို ပြန်လည်ပြုပြင်ဖို့ အတွက်တရိစြွာန်တွေဟာ ဝက်သိုး
ကြီးရှူးမောင်ကို တေိာလှန်ခဲ့ကြတယ် ။
ဆဒ္ဒန်ဆင်မင်းရဲ့ သမီးဖြစတဲ့ ခွပ်ဒေါင်းမင်းသမီးလေးကို ဗမာခြံအတွက် ခေါင်းဆောင်တင်မြောက်ဖို့ တရိစြွာန်အားလုံး
ကသဘောတူညီခဲ့ကြတယ် ။ ဒါပေမဲ့ တခြားဝက်သိုးတွေနဲ့ ဝက်တပ်မတော်က တောခြံကြီးကို ပြန်လည်သိမ်းပိုက်လိုက်ကြပြန်
တယ် ။ သူတို့ကိုယ်သူတို့ နဝတ ဝက်သိုးတရိစြွာန်အစိုးရ လို့ဆိုပြီး အမည်တပ်လိုက်တယ် ။ ခွပ်ဒေါင်းမင်းသမီးလေးကို သူ့
လောင်အိမ်ထဲကို ထည့်လိုက်ပြီး အကျဉ်းချထားလိုက်ကြတယ် ။
နောက်တော နဝတ ကနေ နအဖ လို့ပြောင်းလိုက်တယ် ။ ဒီရဲ့ နအဖ လက်ထက်မှာဘယ်လောက်ဆိုးသလဲ ဆိုတော့
ဝက်သိုးကြီးရှူးမောင်ရဲ့ ဗမာ့တရိစြွာန် ဆိုရှယ်လစ် လမ်းစဉ်ပါတီ ထက်တောင်ဆိုးသေးတယ် ။ ဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ် စည်းပွား
ရေးလုပ်ချင်တယ်ဆိုရင် နအဖ ဝက်သိုးစစ်ဗိုလ်ခုျပ်ကတော်တွေကို ၃ဝ ရာခိုင်နှုန်းပေးရတယ် ။ ဒေသဆိုင် ဝက်သိုးစစ်ဗိုလ်
ကတော် အငယ်တွေကို ၂ဝ ရာခိုင်နှုန်းပေးရတယ် ။ ဘယ်တရိစြွာန်မဆို သူတို့ကို ဆန့်ကျင်ဆန္ဒပြမယ် ဆိုရင်တော့ သူတို့
ရဲ့ အပတ်စဉ်တိုင်း အသစ်ထပ်တိုးပြီး အမြဲတန်းပြောင်းလဲနေတဲ့ တရိစြွာန် ဥပဒေ ပုဒ်မတွေ့နဲ့ ဖမ်းဆီး အကျဉ်းချ ခံရလိမ့်မယ်။
အခုအချိန်မှာတော့ နအဖ စစ်ဝက်သိုးတွေဟာ သခင်ဟောင်း ဦးအင်ပိုင်ယာ ဆီကရော ၊ အေ့ရှဘက်နေထွက်ကျွန်းက
တရိစြွာန်ပုတွေဆီကရော ၊ နောက်ဆုံးကွန်မြူနစ် တွေဆီကမကျန် ယုတ်မာကောက်ကျစ်နည်းတွေကို လေ့လာတတ်မြောက်
ခဲ့ပြီးပြီ ။ ဒါတောင်တရိစြွာန်တွေကို ပိုပြီးဖိနှိပ်ဖို့ဆိုပြီးတော့ အေ့ရှအလယ်ပိုင်း အဆိပ်ပြင်းတဲ့ ကန္တာရပျားခြံတစ်ခုမှာ
ထောက်လှမ်းရေးပညာသင် ဖို့ဆိုပြီးဝက်သိုးစစ်သားတွေကို ပျားမွှေးမြူရေး လေ့လာရေးအဖွဲ့ယောင်ဆောင်ပြီး စေလွှတ်ပြီး
သင်ကြားကြတယ် ။ တကမBာလုံးမှာရှိတဲ့ ခြံတွေဆီကနေပြီး ယုတ်မာကောက်ကျစ်တဲ့ ထောက်လှမ်းရေးနည်းပညာတွေတတ်
မြောက်ပြီးတဲ့နောက်မှာ နအဖ စစ်ဝက်သိုးတွေဟာ ပိုပြီးတော့ ယုတ်မာကောက်ကျစ်တတ်လာတယ် ။ ဘယ်လောက်ထိဆိုး
သလဲဆိုရင် တရိစြွာန်ဘိန်းစိုက်တဲ့ ဘိန်းသူပုန်တွေ ၊ ဘိန်းကုန်ကူးတဲ့သူတွေနဲ့ပေါင်းပြီးတော့ သူတို့ကို အကာအကွယ်ပေး
တယ် ၊ သူတို့ဆီကနေ ဂိတ်ကြေးတွေကောက်တယ် ၊ အကိုျးအမြတ်တွေကို ညစ်ယူတယ် ။ စာရိတ္တပျက်ပြီး အဂတိလိုက်စား
နေတဲ့ ဝက်သိုးစစ်ဗိုလ်ခုျပ်တွေဟာ တဖြည်းဖြည်းနဲ့ ဆူဖြိုးပြီးစည်းဆိမ်ယစ်မူးနေချိန်မှာ ကျန်တဲ့တရိစြွာန်တွေဟာ စားစရာ
တောင်မရှိပဲ အငတ်ငတ်အပြတ်ပြတ်ဖြစ်နေကြတယ် ။
April 15, 2022 at 7:55 am | Reply
Myanmar Animal Farm in Burmese No4
ဝက်သိုးစစ်တပ်ဟာ သခင်ဟောင်း ဦးအင်ပါယာ လုပ်သလိုသူတို့ကိုဆန့်ကျင်တဲ့ တရိစြွာန်တွေကို ပုဒ်မငါးတပ်
ပြီးအကျဉ်းချတာကို တရိစြွာန်အဖို့ စိတ်မချမ်းမြေ့စရာဖြစ်နေတယ် ။ အခုလက်ရှိ ဝက်သိုးကလေကချေစစ်တပ်နဲ့ယှဉ်
လိုက်ရင် သခင်ဟောင်းဦးအင်ပါယာကြီးဟာပိုပြီး လူကြီးလူကောင်းဆန် သေးတယ် ၊ တရိစြွာန်တွေအပေါ်မှာ ညာညာ
တာတာ ဆက်ဆံတတ်သေးတယ် ။ အခုလက်ရှိ ဝက်သိုး နအဖ စစ်တပ်ကတော့ တော်တော့်ကို ရက်စက်ရုတ်မာပြီး
တရိစြွာန်တွေအပေါ်မှာ မညှာမတာဆက်ဆံတယ် ။ အထူးသဖြင့် နိုင်ငံရေးတရိစြွာန်အကျဉ်းသားတွေအပေါ်မှာ ဦးအင်ပါ
ယာ ကြီးက ကောင်းကောင်းမွန်မွန်ထားသလောက် နအဖ ဝက်သိုးစစ်တပ်ကတော့ နိုင်ငံရေးတရိစြွာန်အကျဉ်းသားတွေ
ကို ဆက်ဆံတဲ့နေရာမှာ ရာဇဝတ်ကောင်တွေထက်တောင်ဆိုးသေးတယ် ။ အဲဒါကြောင့် တရိစြွာန်တွေဟာ အကျဉ်း
ကျခံရမှာကို စိုးရွံ့ထိတ်လန့်နေကြတယ် ။ တရိစြွာန်ဆိုတာ ကျယ်ပြန့်တဲ့ ကွင်းပြင်ကျယ်တွေမှာ လွတ်လွတ်လပ်လပ်
ရှဖွေစားသောက်ရတာကို ကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ သဘာဝရှိတယ် ။ လှောင်အိမ်ထဲမှာ အကျဉ်းချခံရမှာကို မလိုလားဘူး ။
ဒီတော့ တရိစြွာန်တွေ ခင်ဗျာအကျဉ်းချခံရမဲ့ အကြောင်းကိုတွေးမိတိုင်း တရိစြွာန်တွေဟာ ဖြစ်ရာဖြစ်ပစေတော့ ဆိုပြီး
လက်လျော့အရှုံးပေးလိုစိတ်တွေ အလိုလိုပေါ်လာပြီး ဝက်သိုးစစ်တပ်လုပ်သမျှကို ခေါင်းငုံ့ခံနေကြတောတယ် ။ ေ့ရှ
ဆောင်နွားလားဖြောင့်ဖြောင့်သွားသော် ၊ နောက်နွားတသိုက်ဖြောင့်ဖြောင့်လိုက်၏ ဆိုတဲ့အတိုင်း တရိစြွာန်တွေခင်
ဗျာ ဒီလိုတွေးတယ် ငါတို့ခေါင်းတွေတောင်မှငြိမ်ခံနေမှတော့ ငါတို့လည်းဘာသားနဲ့ထုထားတာမို့လဲ ဆိုတဲ့
အတွေးဝင်ပြီးတော့ အာလုံးဟာ ဆွံ့အ ဦးကိုျးပြီး လက်လျော့အရှုံးပေးလိုစိတ်တွေပေါ်လာကြတယ် ၊၊
ဒီလိုတော်လှပါပြီ၊ တတ်လှပါပြီဆိုတဲ့ ဝက်သိုးစစ်တပ်ဟာ ဦးအင်ပါယာကြီးထက်တောင် ပိုဆိုးသေးတယ်ဆိုပြီး အခုတော့ တရိစြွာန်တွေသဘောပေါက်လာကြပြီ။ တခိုျ့ေ့ရှမှီနောက်မှီ တရိစြွာန်အိုကြီးတွေကတော့ ဦးအင်ပါယာ
လက်ထက်တုံးက ရွှေxD;aဆာင်းခဲ့ဖူးတာလေးတွေကို ပြန်ပြီးစားမြုံ့ပြန်ကာ လွှမ်းဆွတ်တမ်းတနေကြရုံပဲတတ်နိုင်ကြ
တော့တယ် ။ အခုတော့ အချိန်နှောင်းသွားပြီ။ ဦးအင်ပါယာကြီးကော သူ့ရဲ့ဝမ်းကွဲညီအစ်ကိုတော်တဲ့ ဦးစ ပါဘယ်
တော့မှ ပြန်လှည့်ကြည့်ကြမှာမဟုတ်တော့ဘူး ။ အကယ်၍ တရိစြွာန် တကောင်ကောင်က ဦးအင်ပါယာ ဒါမှမဟုတ်
ဦးစ နဲ့တိတ်တဆိတ်ပူးပေါင်းပြီး ဝက်သိုးစစ်တပ်ကို ဖြုတ်ချဖို့ကိုျးစားမယ်ဆိုရင်တော့ အဲဒီကောင်တွေကို ခြံကြီးရဲ့
သစ္စာပေါက်အဖြစ်သတ်မှတ်ခံရနိုင်တယ် ၊ သားဖျက်ပြီးတော့ လည်းဈေးမှာရောင်းစားခံရဖွယ်ရှိတယ် ။
မြန်မာမှုပြုထားတဲ့ တရိစြွာန်မွေးမြူရေးခြံ မှာတော့ နေဝင်း နဲ့ သန်းရွှေ တို့ကတော့ ဂျော့အိုဝဲလ် ရဲ့ –
Bနမုျ့ငမန Bသမျေ နဲ့တူပါတယ် ။ ကြံ့ဖွံ့နဲ့ မြန်မာစစ်တပ်ကတော့ Bနမုျ့ငမန Bသမျေ ရဲ့နောက်လိုက်ဝက်
သိုးများအဖြစ်နဲ့ တင်ပြထားပါတယ် ။ တခြားတရိစြွာန်များဖြစ်တဲ့ မြင်း၊ ဆိတ် ၊ ကြက် နဲ့ ငန်း အစရှိတဲ့ တရိစြွာန်တွေ
ကိုတော့ သာမန်မြန်မာပြည်သူများကို ကိုယ်စားပြုထားပါတယ် ။ ခြံထဲကနေ ကန်ထုတ်ခံရတဲ့ ှညသတဘေူူ ကိုတော့
အမိုျးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ခုျပ်မှ ဦးတင်ဦးနဲ့ နှိုင်းယှဉ်ဖေါ်ပြထားပါတယ် ။ ဗိုလ်ခုျပ်အောင်ဆန်းကိုတော့ ဆဒ္ဒန်ဆင်မင်း
အဖြစ်တင်စားပြီး ဒေါ်အောင်ဆန်းဆုကြည်ကို ရဲရင့်တဲ့ ခွပ်ဒေါင်းမင်းသမီးလေး အဖြစ်နဲ့ တင်ပြထားပါတယ် ။ စစ်အစိုးရ
ကို မျက်နာလိုမျက်နာရ ဖော်လန်ဖားတတ် တဲ့ စစ်အစိုးရပိုင်သတင်းစာမှ စာနယ်ဇင်းသမားတွေကိုတော့ ှဆကနေူနမ
ဆိုတဲ့ဇာတ်ကောင်နဲ့ နိုင်းယှဉ်ဖော်ပြထားပါတယ် ။ မြန်မာပြည်သူတွေကို နိုင်ထက်စီးနင်းပြုတတ်ပြီး စစ်အစိုးရရဲ့လက်
ကိုင်တုတ် စစ်ထောက်လှမ်းရေး ၊ စစစ နဲ့ရဲ တို့ကတော့ စစ်အစိုးရမွေးထားတဲ့ခွေးများသာဖြစ်ပါတယ် ။
April 15, 2022 at 7:56 am | Reply
Myanmar Animal Farm in Burmese No6
တိရစြွာန်အားလုံးတန်းတူအခွင့်အရေးရှိတယ် ဒါပေမဲ့တခိုျ့ကပိုပြီးတော့ တန်းတူအခွင့်အရေးရှိတယ် ဆိုတဲ့မူ
နဲ့ ဝက်သိုးစစ်တပ်ကြီးဟာ မွေးမြူရေးခြံကြီးကို အောင်မြင်စွာနဲ့ အုပ်ခုျပ်နေကြတယ် ။
လွတ်လပ်ရေးရပြီးတာတောင် ၅၈ နှစ်တောင်ရှိပြီဖြစ်ပေမဲ့ ဝက်သိုးစစ်တပ်ဟာ သခင်ဟောင်း ဦးအင်ပါယာကြီး
ရဲ့ သွေးခွဲအုပ်ခုျပ်ရေးကို ပုံတူကူးပြီး ကျင့်သုံးနေဆဲဖြစ်တယ် ။ တိရစြွာန်အားလုံးတန်းတူ အခွင့်အရေးရှိတယ်
ဒါပေမဲ့ တခိုျ့ကပိုပြီးတော့ တန်းတူအခွင့်အရေးရှိတယ် ။ တိရစြွာန်တော်တော်များများဟာ သူတို့ရဲ့သားရေအ
ရောင် ဒါမှမဟုတ်သူတို့ရဲ့ အမွှေးအတောင်တွေရဲ့ အရောင်၊ အမိုျး ၊ ဘာသာ ပေါ်မူတည်ပြီး ခွဲခြားဖိနှိပ်မှုတွေကို
ခံစားနေကြရှာတယ် ။ တခိုျ့တိရစြွာန်တွေဆို သူတို့ရဲ့ဘိုးဘွားဘီဘင်တွေ လက်ထက် ကတည်းကရင်း တခြားခြံက
နေပြောင်ရွေ့အခြေခြပြီးနေထိုင်လာခဲ့တာ တောင် ခွဲခြားဖိနှိပ်မှုတွေကို ဒီနေ့မိုျးဆက်တွေ ခံစားနေကြရှာတယ်။ အဓိ
က အကြောင်းအရင်းကတော့ ဒီခြံရဲ့မူလမိုျးစိတ်မဟုတ်လို့ဆိုတဲ့ အကြောင်းပြချက်နဲ့ ဒီလိုခွဲခြားခံနေကြရတာဖြစ်
တယ် ။ ဒီလိုခြံပြောင်းရွေ့ အခြေခြနေထိုင်ခဲ့သူ တွေရဲ့ မိုျးဆက်သစ်တွေဟာ တကယ်တော့ ဒီခြံကြီးထဲမှာမွေး ၊ ဒီခြံ
ထံမှာပဲကြီး ၊ ဒီခြံကြီးရဲ့ ဓလေ့ထုံးစံနဲ့ ဘာသာစကားတွေကို ပြောဆိုပြုမူနေထိုင်ပြီး ဒီခြံကြီးရဲ့ ငယ်မွေးခြံပေါက်တွေ
အဖြစ်နဲ့ ကြီးလာခဲ့တာတောင် သူတို့ဟာ တခြားငယ်မွေးခြံပေါက်တွေရဲ့ အခွင့်အရေးတွေကို မရရှိကြဘူး ၊၊ တိရစြွာန်
ခြင်း အတူတူဖြစ်တာတောင် သူတို့တွေဟာ အခြေခံ တိရစြွာန် အခွင့်အရေးတွေဆုံးရှုံးနေကြရတယ် ။ တခြားခြံတွေမှာ
ဆို မွေးစားထားတဲ့ တိရစြွာန်တွေတောင် အခြေံတိရစြွာန် အခွင့်အရေးတွေကို အဲဒီခြံကြီးရဲ့ တိရစြွာန်တွေနဲ့တန်းတူ
ရရှိတြတယ် ။ အနိမ့်ဆုံးအဆင့်အနေနဲ့တော့စာရွက်ပေါ်မှာလောက်တော့ရကြတယ် ။
ယနေ့အချိန်အခါမှာတော့ လက်တဆုပ်စာသာရှိတဲ့ လိမ္မာကျောက်ကျစ်တဲ့တိရစြွာန်တအုပ်ကခြံကြီးကိုအုပ်ခုျပ်နေ
ပြီးတော့ ကျန်တဲ့ တိရစြွာန်တွေခင်ဗျာ ခြံကြီးထဲမှာ ပင်ပင်ပန်းပန်း လုပ်ကိုင်စားသောက်နေကြရရှာတယ် ။ ဒီလိမ္မာ
ကောက်ကျစ်တဲ့ တိရစြွာန်တအုပ်က သူတို့ကိုယ်သူတို့ တခြားတိရစြွာန်တွေနဲ့ မတူအောင် နာမည်ဆန်းတွေမဲ့ထားကြတယ် ။ သူတို့ကိုယ်သူတို့ မြန်မာတိရစြွာန်များတပ်မတော် နဲ့ မြန်မာတိရစြွာန်များ စစ်မှုထမ်းဟောင်းအဖွဲ့ ဆိုတဲ့
အဖွဲ့နာမည်မိုျးကိုပေးတယ် ။ ပြီးတော့ သူတို့ရဲ့နာမည်ေ့ရှကနေ ဗိုလ် ၊ဗိုလ်ခုျပ် ၊ ဗိုလ်ခုျပ်မှူးကြီး ဆိုပြီး စသဖြင့်
ရထူးအဆင့်အတန်းလိုက်ပြီး ခေါ်ကတယ် ။ နောက်ပြီးတော့ ဝန်ကြီးနေရာတွေ ၊ ညွှန်ကြားရေးမှူးတို့ ၊ မန်နေဂျာတို့
လိုအစရှိတဲ့ ရာထူးတွေကို တခြားတိရစြွာန်တွေရဲ့ အပေါ်ကနေဂုတ်ခွဆီးပြီးယူထားကြတယ် ။ ပင်ပန်းကြီးစွာနဲ့ရှာဖွေ
လုပ်ရှားရှုန်းကန်နေကြရရှာတဲ့ သာမန်တိရစြွာန်တွေကိုတော့ အရပ်ဘက်မြန်မာတိရစြွာန်တွေလို့ခေါ်ကြတယ် ။ မြန်
မာတိရစြွာန်စစ်တပ်ကတော့ တခြံလုံးမှာရှိတဲ့ စည်းပွားရေးလုပ်ကိုင်ခွင့်တွေ ၊ ပါမစ်တွေ ၊ အခွင့်ရေးထူးတွေအားလုံး
ကို လက်ဝါးကြီးအုပ် ခုျပ်ကိုင်ထားကြတယ် ။ ရေပေါ်ဆီကိုမှ ဟပ်တတ်တဲ့ဝက်သိုးတွေပဲပေါ့။
လောဘကြီးပြီးဖေါက်ပြန်တဲ့ တိရစြွာန်တွေဟာ တိရစြွာန်ကြံ့ဖွံ့အဖွဲ့ တို့ ၊ တိရစြွာန်မိခင်နဲ့ကလေးစောင့်ရှောက်
အဖွဲ့တွေထဲကို ချမ်းသာဖို့ ၊ အာဏာရှိဖို့ ၊ အကာအကွယ်ရဖို့ ၏ တခြားတိရစြွာန်တွေပေါ်မှာ ဗိုလ်ကြဖို့ ဆိုတဲ့အကြံ
ဆိုးတွေနဲ့ ဝင်ကြသတဲ့ ။ မြန်မာတိရစြွာန်စစ်တပ် ဒါမှမဟုတ် အထက်ဖေါ်ပြပါ အဖွဲ့အစည်းတခုခုကလူတွေနဲ့ မိတ်
ဆွေသူငယ်ချင်းသော်လည်းကောင်း ၊ ဆွေမိုျးသာချင်းသော်လည်းကောင်း တော်စပ်သူရှိထားခဲ့ရင် သင့်အနေနဲ့ ဓါတ်
ဆီပါမစ်တွေ၊ ကန်ထရိုက်ပါမစ် အစရှိတဲ့ အခွင့်ထူးတွေကိုရတဲ့ အခွင့်ထူးခံလူတန်းစားအဖြစ်ကို ရောက်ရှိသွားလိမ့်
ယခုအချိန်မှာတော့ ချမ်းသာကြွယ်ဝတဲ့ ဝက်သိုးစစ်ဗိုလ်ခုျပ်တွေဟာ သာမန်ဆင်းရဲတဲ့ တိရစြွာန်တွေရဲ့ ဂုတ်သွေး
ကို စုပ်ပြီးတော့ ချမ်းသာကြွယ်ဝနေကြတယ် ။ ဝက်သိုးစစ်ဗိုလ်ခုျပ်တွေဟာ အာဏာနဲ့ စည်းဆိမ်မှာယစ်မူးနေပြီးတော့
ဗမာခြံကြီးနဲ့ တိရစြွာန်အားလုံးကောင်းစားရေးကို လျစ်လူျရှု့နေကြတယ် ။ မသမာတဲ့ နည်းတွေနဲ့ချမ်းသာလာတဲ့ ဝက်
သိုးစစ်ဗိုလ်ခုျပ်မှူးကြီးရဲ့ ရောင်းရင်းတယောက်က ရပ်ဘက်သုံးအမေရိကန်ဂျစ်နှစ်စီးကို တခြားခြံတခုကနေတင်သွင်းခဲ့
တယ် ။ တစီးကို သူကိုယ်တိုင်သုံးပြီးတော့ နောက်တစီးကိုတော့ သူ့ရဲ့တရားမဝင်ယောက်ဖဖြစ်တဲ့ ဝက်သိုးဗိုလ်ခုျပ်မှူး
ကြီးရဲ့သားဝက်သိုးပေါက်လေးကို ပေးလိုက်တယ် ။ ဒီဝက်ကြီးက မြန်မာတိရစြွာန်စစ်တပ်အတွက် ရဟတ်ယာဉ်နှစ်ဆင်း
ဝယ်ပေးခဲ့တယ် ။ ဒါလောက်တော့ မြန်မာဝက်သိုးစစ်တပ်ကို ရုရှားခြံကနေလက်နက်တွေ တင်သွင်းခွင့်ရထားတဲ့ သူ့အတွက်
တော့ အသေးအဖွဲလောက်ပဲရှိလိမ့်မယ် ။
ဒီလိုဝက်သိုးဗိုလ်ခုျပ်မှူးကြီးနဲ့ အပေါင်းအပါတွေခြံထဲမှာ ထင်တိုင်းကြဲ ဖြစ်ချင်ရာ ဖြစ်နေတဲ့ အချိန်မှာတော့ သာမန်
တိရစြွာန်တွေခင်ဗျာ အဟာရဓာတ်မျှတအောင် မှီတင်းဖို့အတွက် အသားတောင်မစားရတာကြာလို့ မေ့တောင်မေ့နေကြ
ပြီ။ တခိုျ့တိရစြွာန်တွေဆိုရင် ထမင်းတောင်နှပ်မှန်အောင် မစားနိုင်ကြတော့လို့ ထမင်းရည်ပူကို ရက်နေကြရရှာတယ် ။
ဒီအကြောင်းတွေကို ဘယ်တိရစြွာန်ကမှ မပြောရဲ ကြဘူး၊ ဒီကိစ္စတွေနဲ့ ပက်သက်ပြီး ဝက်သိုးစစ်တပ်ကို ဆန့်ကျင်ပြီး
ဆန္ဒမပြရဲ့ကြဘူး ။ အဲဒီလိုသူတို့ကို ဆန့်ကျင်တော်လှန်တဲ့သူတွေကို တခိုျ့ကိုအရှင်လတ်လတ် အရေခွံဆုတ်ပြီးနေပူလှန်း
ပစ်လိုက်တယ် ၊ တခိုျ့ကို အမဲဖျက်ပြီးတော့ဈေးမှာ ထုတ်ရောင်းပစ်လိုက်တယ် ။ တခိုျ့လည်း ထောင်ထဲမှာနှစ်ရှည်လများ
အကျဉ်းချခံနေကြရရှာတယ် ။ ဒါကြောင့်သူတို့ဟာ သူတို့ရဲ့စိတ်ပျက်စရာကောင်းတဲ့ ဘဝတွေနဲ့ပဲ မသေရုံတမယ် လုပ်ရှား
ရှုန်းကန်နေကြရတယ် ။ ခြံကြီးရဲ့စီးပွားရေးကလည်းတဖြေးဖြေးနဲ့ကျဆင်း ၊ ဝင်ငွေတွေကလည်းလျော့နည်းလာ ၊ နေထိုင်မှု
စရိတ်တွေကလည်း ခေါင်ခိုက်နဲ့ ဒီလိုအစစအရာရာ ဘာတစ်ခုမှ မက်မောစရာမရှိအောင်ကို ဗမာခြံကြီးရဲ့ အခြေအနေက
ဆိုးဝါးနေချိန်မှာ တိရစြွာန်တွေဟာ ခြံထဲကနေ တရဝင်တဲ့နည်းနဲ့ကော တရားမဝင်တဲ့ နည်းနဲ့ထွက်ခွာပြီး တခြားခြံတွေမှာ
တိုးတက်ရာတိုးတက်ကြောင်း ကိုရှာပြီးတော့ လုပ်ရှားရှုန်းကန်နေရတော့တယ် ။
အစဉ်အဆက်ဝက်သိုးဗိုလ်ခုျပ်မှူးကြီးတွေကတော့ သူတို့မှာရောကိုယ်စီရှိကြတယ် ။ ပထမဆုံးဗိုလ်ခုျပ်ကြီးရှူးမောင်
ကတော့ မင်းမိုျးမင်းနွယ် တယောက်ကို လက်ထပ်ဖို့ကိုျးစားခဲ့တာ မအောင်မြင်ခဲဘူး ။ ဒုတိယဗိုလ်ခုျပ်မှူးကြီးတော့ သူ့
ကိုယ်သူ ကျန်စစ်သားလို့ဆိုပြီးသွေးရူးသွေးတမ်းနဲ့အော်ပြီးအသက်ထွက်သွားတယ် ။ အခုလက်ရှိဗိုလ်ခုျပ်မှူးကြီးကတော့
ဗမာတိရစြွာန်မင်းရဲ့နောက်ဆုံးမင်းဆက်ဖြစ်တဲ့ သီပေါမင်း ကနေဆင်းသက်လာတယ်လို့ ဆိုပြန်သတဲ့ ။ ဒါပေမဲ့ သီပေါမင်း
ကနေဆင်းသက်လာတယ် ဆိုရင်တော့ သီပေါ ဆိုတဲ့နာမည်အပြည်အစုံကနေတော့ ဆင်းသက်လာတာမဖြစ်နိုင်ဘူး ။နောက်
ဆုံးစာလုံးဖြစ်တဲ့ ပေါ ဆိုတဲ့ စာလုံးကနေပဲဆင်းလာတဖြစ်မယ် ။ တိရစြွာန်စကားနဲ့ ဆိုရင်တော့ သူဟာအရူးအပေါကြီးပေါ့။
ဒါကြောင့် အပေါတကာထွဋ်ခေါင် ဗိုလ်ခုျပ်ပါကြီးဖြစ်နေတာဘဲ ။ သူကတော့ဘုရင်ရူးလည်းရူးလိုက်သေးတယ် ။ အရူးရောဂါ
လည်း တဖြည်းဖြည်းမြင့်လာရော မြို့တော်ကို ခြံရဲ့အတွင်းပိုင်းတနေရာကို ပြောင်းသွားပြီးနေပြည်တော်လို့ မဲ့ထားတယ် ။
နောက်ဆုံးဘဝင်မြင့်တဲ့ ရောဂါကိုတော့ဘယ်လိုမှကုလို့မရတော့ဘူး ။
ဝက်သိုးစစ်တပ်ဟာ သခင်ဟောင်းဦးအင်ပါယာဆီကနေ လေ့လာသင်ယူထားတဲ့ သွေးခွဲအုပ်ခုျပ်ရေးစံနစ်ကိုတော့ အစဉ်
အမြဲကျင့်သုံးလျက်ရှိတယ် ။ တိရစြွာန်တွေကြားမှာဒီနည်းတွေသုံးပြီး အမိုျးမိုျးပြဿနာတွေဖြစ်အောင်ဖန်တီးလေ့ရှိတယ် ။
မြောက်ဖြူနှစ်တော့ဝက်သိုးစစ်တပ်ဟာ မြောက်ပိုင်းစိနခြံက ဆင်းသက်လာတဲ့ ပင်ဒါတွေကို မြောက်ပိုင်းနဂါးဘုရင် ကို